Kashifaad: Sirdoonnada Mareykanka iyo Ingiriiska oo la ogaaday in ay dilal qarsoodi ah ka geysanayaan dalka Kenya.
Sunday August 30, 2020 - 18:08:11 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Koox isku xidhan oo qarsoon islamarkaana ay aasaastey CIA-da caawimaadna ka helaya sirdoonka dawladda ingiriisku ayaa falal waxshinimo ah ka geystay gudaha dalka kenya.
Kooxdan oo loo aasaasay si ay ula dagaallamaan waxa loogu yeedho argagixisada ayaa muddooyinkii u dambeeyay dilal qarsoodi ah ka geysanayay gudaha wadanka Kenya halkaas oo ay ku gummaadayeen dad muslimiin ah.
Sirdoonnada CIA-da iyo MI6 ayaa adeegsaday Lambarro been abuur ah iyo taaktikooyin dadka ay ka shakiyaan lagu gummaadayo, mararka qaar waxay isku ekaysiiyaan ha'yadaha gargaarka waxayna tagaan xeryaha qoxooyiyada.
Khaarajinta dadku waxay Kenya ka dhigaysaa Xagjir..sidaa waxaa yidhi Ambasadoorkii hore ee Mareykanka.
Maalin ka hor bilawgii bishii Agoost sanaddii 2019 ayaa nin 45jir ah oo tagsiile ah lagu dilay wadanka Kenya, Warbixin dheer oo uu diyaariyay wargeyska dailymaverick ayaa lagu sheegay in ninkan oo magaciisa layidhaa Modi uu habeennimo xaaskiisa amray in ay reerkoodii qabato. Markii xaaskiisu isku dayday iney diido ayuu aad u cadhooday sida la sheegay. Habeenkaa waxa la dareensanaa in ay wuxuun dhici doonaan. Wararka qaar ayaa tibaaxaya in loogu hanjabey habeenkaas in uu xaaskiisa diro.
Mareykanka iyo ingiriisku waxay lacago aad u badan Kenya ku siiyaan mashruuca loogu yeedho la dagaalanka argagixisada.
Haddaba Ururka Alshabaab oo ah kan ugu xooggan bariga afrika ayaa marar badan weeraro ka geystay Kenya sida kii westigate ee 2013. Kaas oo warbixinta lagu qoray wargeyskani sheegtay in dhimashadii westigate ahayd 67 halka sidoo kale ay ku xuseen weerarkii Gaariso oo ay warbixintu ku sheegtay in ay ku halaagsameen 148 qof.
Laamaha ammaanka dowladda Kenya oo ah kuwa aad uliita oo uu musuq maasuq dilooday ayaa maciin biday in ay kaalma weydiistaan sirdoonnada caalamiga ah ee reergalbeedka.
Dilalka ugu badan ee dilalkani ka dhaceen waa gobollada muslimiinta Kenya degaan, madaxda Kenya badanaa kama hadlaan ku lug lahaashiyaha sirdoonada shisheeye ee weerarada lagu hayo muslimiinta Kenya.
Lama oga halka weerarada qarsoodiga ah ee kooxahan uu mareykanku unkay ay ku dambayn doonto laakiin waxa dhici karta cadho shacab oo ballaadhan isla markaana lagaga gilgilanayo dulmiga kooxahan qarsoodiga ah.
W/Q Wadaad Yare Xaashi
Saadaashii ugu dambaysay oo muujinaysa in Trump looga adkaan doonto doorashooyinka Mareykanka.
Suudaan oo ogolaatay in ay lacag 335 Malyan ah siiso Mareykanka!
Taliban oo Mareykanka uga digtay burbur ku yimaad heshiiskii Dooxa!